Otu esi kuziri ụmụ gị ihe isi ike bụ | Bezzia
Otu esi ak uziri um ugi ihe isi ike
Maria Jose Roldan | 15/05/2021 10:52 | Na-akụziri ụmụaka ihe
O di nwute, mgbu na nhụjuanya bụ akụkụ nke ndụ ma ọ dị mkpa ịmara otu esi eche ihu oge dị otú ahụ. N'ebe ụmụaka nọ, ọnọdụ ahụ pụrụ ịdịkwu mgbagwoju anya. Ọnwụ nke onye dị nso ma ọ bụ mgbanwe dị mfe nke ụlọ nwere ike imetụta ahụike mmetụta uche nke nwatakịrị ahụ n'ụzọ na-adịghị mma.
Ọ bụ ya mere ndị nne na nna ga-eji kụziere ụmụ ha ka ha mata ihe isi ike ha bụ n'ụzọ dị otú a iji nwee ike imeri oge mgbagwoju anya nke ha nwere ike inwe na ndụ ha niile.
1 Gịnị bụ nnagide?
2 Ntuziaka Ndị nne na nna ga-agbaso iji kụziere ụmụ ha ịdị ike
Gịnị bụ nnagide?
Iguzogide ihe abụghị ihe ọzọ karịa ikike mmadụ nwere, inwe ike iguzogide ọnọdụ nke a na-ewere dị ka ihe siri ike na ihe siri ike. A gha muta ikike a site na nwata. Agụmakwụkwọ nke ndị nne na nna bụ isi ka ụmụaka wee nwee ike mụta iguzogide ọgwụ site na afọ mbụ nke ndụ. Mgbe ahụ anyị ga-agwa gị otu ndị nne na nna kwesịrị isi rụọ ọrụ na nnabata nke ụmụ ha.
Ntuziaka Ndị nne na nna ga-agbaso iji kụziere ụmụ ha ịdị ike
Nke mbụ, ụmụaka ga-enwerịrị obi ike iji merie nsogbu ụfọdụ. Mụ ntakịrị kwesiri ịmara na omume ọ bụla nwere nsonazụ ya ma na nke a mee ha ga-eme mkpebi nke aka ha. Mustmụaka ga-enwerịrị nnwale na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na mgbe ụfọdụ ha na-ezi ezi na oge ndị ọzọ na-ezighi ezi. Ihe dị mkpa bụ na ha na-enweta nkwado n'oge niile nke ndị mụrụ ha wee si otú a mee ka ntụkwasị obi ha sikwuo ike.
Inyere ha aka ibulite ugwu nke onwe ha dị mkpa n'ịmụta ihe nkwụghachi bụ. N'inwe mmetụta nke bara uru yana ike, Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ na-enyere nwata ahụ aka iche nsogbu dị iche iche nwere ike ibilite na ndụ ya niile.
Ihe ọzọ ndị nne na nna na ụmụ ha kwesịrị ịrụkọ ọrụ bụ okwu banyere nkụda mmụọ. Childrenmụaka kwesịrị ịma na e nwere mgbe ụfọdụ ihe na-anaghị arụ ọrụ na nke mbụ ya nakwa na ọ dị njọ ihie ụzọ. Mana n’ihi nke a, ị gaghị enwe nkụda mmụọ, ị ga-ekwusi ike ka ị nweta ihe ị chọrọ.
Na mmechi, odi nkpa ka umuaka mara ihe idi ike bu site na nwata. Ndị nne na nna aghaghị ịkụziri ụmụ ha na a ga-enwe ihe ngwọta maka ihe niile nakwa na ọ dị mkpa ịchọta ụzọ ahụ ga-enye gị ohere ịnọ n'ụzọ kachasị mma. Okwesiri ighota na umuaka gha ata ahuhu n’oge di iche iche na ndu ha na idi ike bu ihe enyere ha aka imeri oge di uzo di nkpa.
Ọ bụ ihe dị mma nye ndị nne na nna ịnwe ezigbo oge mgbe ha hụrụ etu ụmụ ha si nwee oge ọjọọ na ahụhụ, mana ọ bụ ihe nkịtị nke ga-emerịrị ma wee kweta. N'ihi ngwaọrụ ndị dị ka nnabata, ụmụaka ga-enwe olileanya ịnagide nsogbu ndị a na enwe mmetụta na mmetụta uche dịka ihe mgbu ma ọ bụ mwute.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Na-akụziri ụmụaka ihe » Otu esi ak uziri um ugi ihe isi ike
Ntu ero: Na-emeso ha ozugbo enwere ike!